Eyona midlalo ilula yokukhanya ye-Android | I-Androidsis
Eyona midlalo ilula yokukhanya ye-Android
UAron Rivas | 29/05/2021 06:00 | Izixhobo ze-Android, Imidlalo ye-Android
Kwi-Android kukho imidlalo emininzi yokukhuphela kunye nokuzama, kwaye nganye ingcono kunomnye. Kukho zonke iintlobo kunye neendidi: isenzo, umlo, ubuchule kunye nengqondo, yabantwana, yabantu abadala, izithambiso, umdyarho, izithuthuthu, imilo kunye nokuyeka ukubala. Kukho zombini simahla kwaye zihlawulwe, kunye nokukhanya okanye ubunzima. Ngapha koko, sihlala siqokelela eyona midlalo ilungileyo kwicandelo ngalinye, ukuze sikunike okona kumnandi, kudlalwe kwaye kukhutshelwe kwiVenkile yokudlala, kwaye ngoku lithuba imidlalo elula.
Kule posi yokudibanisa intsha sikudwelise Eyona midlalo mihlanu ilula yokuKhanya. Oku kunikezelwe ngokukodwa kwabo basebenzisi banesiphelo esisezantsi, kuba iimodeli ezininzi zoluhlu azinakuqhuba ngokutyibilikayo kwimidlalo enzima kunye nemfuno, ke abo bafuna izixhobo ezimbalwa zezona zixhasa izixhobo zekhompyuter.
Apha ngezantsi uyakufumana uthotho lweyona midlalo ilula yokukhanya. Kubalulekile ukuba uqaphele, njengoko sihlala sisenza, ukuba wonke umntu uya kufumana kule post Zisimahla. Ke ngoko, awuzukunyanzela ukuba wenze nayiphi na imali ukuze ufumane enye okanye zonke. Nangona kunjalo, enye okanye ezingaphezulu zinokuba nenkqubo yentlawulo encinci encinci, enokuvumela ukufikelela kumxholo ongaphezulu ngaphakathi kubo, kunye nokufumana amabhaso, izinto kunye nemivuzo. Ngokufanayo, akuyomfuneko ukwenza nayiphi na intlawulo, kufanelekile ukuphinda.
Kwelinye icala, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba Imidlalo esiyidwelise apha ngezantsi inokudlalwa ngokulula nangokutyibilikayo ngeefowuni ezisezantsi. nge-1 okanye nge-2 GB ye-RAM kunye neeprosesa ezine okanye ezisibhozo ezingaphakathi ezingabinayo iwotshi ephezulu yewotshi, ngaphandle kokwenza ukuba zifunwe kakhulu, ngenxa yokukhanya kwazo. Kwangelo xesha, njengombono wokuqonda, banokuqhutywa ziiselfowuni ezinesixhobo esingcono kunye nokusebenza okuphezulu, njengaphakathi noluhlu oluphezulu.
1 PAKO ngonaphakade
3 UGqirha Parking 4
4 Ihlabathi lelep
5 Umsindo wentonga 5: zombie
Siqale olu qokelelo ngomdlalo omkhulu wokukhanya we-Android, ekungekho enye ngaphandle kwePAKO ngonaphakade, isihloko osenokuba usivile emntwini kuba yenye yezona zinto zikhutshelweyo kwivenkile, kunye nokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezi-5 kunye nokukhulu Inqanaba leenkwenkwezi le-4.3 kwiVenkile yokudlala.
Umxholo walo mdlalo ulula, kodwa ubandakanyeka kakhulu. Sinemoto yokuqhuba kwindawo yokupaka engapheliyo, kodwa hayi ... ukuba ucinga ukuba kufuneka uyipake, kuya kufuneka uyazi ukuba ichasene. Kuya kufuneka uqhube ungakhange ume, kwaye ungabinanto uyenzayo, kuba amapolisa akuleqa kwaye kufuneka ubaleke! Musa ukuvumela ukuba bakunqande; ukuba uyakwenza oko, uza kulahleka.
Ku malunga umdlalo wokuleqa olula apho kufuneka ubaleke khona amagosa, ababaleqa ezimotweni zabo nakwiipatroli zamapolisa. Abayihloneli indlela kunye neempawu, ke nawe awufanele ukuba ufuna ukuphuma kwindawo yokupaka engapheliyo uyaphila. Njengoko ungabanjwa, izinto ziya zisiba nzima ngakumbi, kodwa ungakhathazeki, unezakhono eziya kukunceda ukuba ubaleke amapolisa kwaye utshabalalise imiqobo. Yonke into iyenzeka ngelixa isandi esenza ukuba uhambise intloko yakho ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye okanye phezulu nasezantsi.
Uneemoto ezininzi onokuzivula xa udlala, kunye nemo yolu khuphiswano kunye nempumelelo. Kukwakho neziganeko ezininzi zokupaka ezenza ukuba ungabinangxaki. Ukongeza, unokufumana kwaye usebenzise izinto ezinqabileyo ezinokukunceda kwimfuno yakho yokubaleka kumagosa ezomthetho.
Imizobo yomdlalo ilula, kodwa yenziwe kakuhle, ingasathethi ke ngoopopayi. Kwelinye icala, enye yezona zinto zibalaseleyo ngalo mdlalo, othi ayinobunzima malunga ne-25 MB, kukuba ayifuni unxibelelwano lwe-Intanethi ukuze idlalwe, ukuze uyidlale ngalo naliphi na ixesha naphina ngaphandle kwengxaki. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisihloko esifanelekileyo ukuzama.
Umthuthukisi: Umdlalo wamadoda weMithi
Kunokubonakala kunzima kakhulu ukufumana umdlalo omnandi kunye nolonwabo kwiVenkile yokudlala enobunzima obungaphantsi kwama-25 MB, kodwa bukhona, kwaye sinobungqina bayo kunye I-Noirmony, isihloko esingaphaya kwe-20 MB kwaye isekwe kumxholo okhethekileyo we-monochromatic, onohlobo oluthile lwe-gothic.
Kule mdlalo kufuneka wenze umlinganiswa atsibe kumagqabi amnyama, kodwa ngaphandle kokuthintela iingozi ezibonakala kuwo onke amanqanaba angapheliyo. Emva koko, kufuneka uqokelele iikristali, eziza kukunceda uvule abalinganiswa, ufumane izinto ezintsha ezinomdla kwaye uthenge izinto ezininzi, kwaye ufikelele phezulu kuyo yonke into kwihlabathi elingenasiphelo.
KwiNoirmony unokuvula kwaye ukhethe nayiphi na ngaphezu kwama-30 amagama afumanekayo kuwe. Ukwenza oku, kuya kufuneka udlule kumanqanaba kwaye ufumane amabhaso, ekungekho lula kwaphela kuwo. Ubungqingqwa kunye nokuqina kwesi seti esisindayo kakhulu kwenza ukuba kube yenye yezona zinto zichanekileyo kwivenkile yonke.
UGqirha Parking 4
UGqr. Ukupaka 4 yenye yezona ndawo zidumileyo nezidlalwayo kwimidlalo yokulinganisa kwiVenkile yeGoogle Play. Ngokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezili-100 kunye nenqanaba leenkwenkwezi eli-4.2 ngokusekwe ngaphezulu kokuphononongwa okuhle kunye nokulinganiswa okungama-720, lo mdlalo ungasindi, onobunzima nje obungaphezu kwe-18MB, ubalwa njengenye yezona zilungileyo zohlobo lwazo. Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba sisihloko esingadingi kuqhagamshelo lwe-Intanethi ukuba ludlalwe, ukuze uyidlale naphi na nangaliphi na ixesha, ngaphandle kwesizathu.
Ukuba ucinga ukuba ukupaka iimoto kuyinto elula kwaye elula, unokuba ungalunganga. Ekuqaleni kulula, kodwa kwinqanaba ngalinye umba uba nzima ngakumbi kwaye ngokuthe ngcembe. Kukho imiqobo kunye neendawo eziza kwenza kube nzima kuwe, ke thatha ubuchule kunye nokuziqhelanisa ukuba ungajongi kakubi kwaye ubonise ukuba ungukumkani wevili kuGqirha Ukupaka 4.
Umthuthukisi: SUD Inc.
Ukuba unesithuba esincinci sokugcina kwi-smartphone yakho ye-Android, kodwa usafuna ukufumana umdlalo omnandi kakhulu kunye nokuzonwabisa, iLep's World sisihloko sakho, ngakumbi ukuba ungumthandi wemidlalo yeqonga kunye noMario, oyena mntu uthandwayo wasentsomini weNintendo. . Ewe, musa ukudideka; Ngumdlalo owahlukileyo kuMario, nangona uphefumlelwe ngumxholo wayo, ke ngokuqinisekileyo iya kukukhumbuza kakhulu.
Sukuyijongela phantsi. Ngobunzima nje be-30 MB, iLep's World ine-250 yezigidi ezikhutshelweyo kwiVenkile yokudlala kuphela. kwaye lo mdlalo ukhanyisela amandla awo, apho kuya kufuneka udlule kwihlabathi, amanqanaba kunye nemizekelo yokufikelela esiphelweni ngasinye kwaye uqhubeke nokudlala.
Iiakhawunti ezinamazinga angaphezu kwe-160, nganye enemizobo eyenziwe kakuhle kunye noopopayi abahle. Hambisa kwaye ulawule irobhothi ephambili kwaye uqokelele zonke iingqekembe, kodwa sukuvumela izidalwa kunye neentshaba zikoyise. Dodge kwaye ubabethe ukufikelela kwinqanaba lenqanaba ngalinye. Unokufumana kwakhona abalinganiswa abanomdla, phakathi kwabo oku kulandelayo: IBlurgg njengeZombie, uLong John njengePirate, iSuper Sam njengeRobot, uCollen njengentombazana nokunye.
Umbuzo, Kuya kufuneka uye kumazwe ahlukeneyo ama-6, nganye inzima ngakumbi kunenye kwaye ineempawu ezahlukileyo nezithandekayo. Kukwakho nempumelelo emininzi ekufuneka uyigqibile, kunye nenkqubo yokuma. Ukongeza koku, kufanelekile ukuba uqaphele ukuba iLep's World ayifuni unxibelelwano lwe-Intanethi oluza kudlalwa, olwenza ngcono nangakumbi.
Umthuthukisi: nerByte GmbH
Umsindo wentonga 5: zombie
Ukugqibezela esi sithuba sokudityaniswa kweyona midlalo ilula yokukhanya kweefowuni ezihanjiswayo ze-Android, sinikela kuwe ingqumbo yentonga 5: zombie, umlo kunye nomdlalo wokulwa apho kuya kufuneka ube zezona zinobuchule ukoyisa iintshaba zakho kungquzulwano ngezixhobo nangamanqindi , njengoko kukho imo yeHulk eya kukuvumela ukuba uzisebenzise. Kukho imipu emininzi kunye nemipu, kunye nezinye izinto onokuzixhobisa ukujongana nomkhosi weentshaba ezifuna ukukuthintela ukuba ungadluli kwigumbi nakwinqanaba ngalinye.
Kule mdlalo uya kufumana yonke into ukusuka kwiinqwelomoya ukuya kwiirobhothi, ezenza ukuba izinto eziguqukayo zizonwabise ngokupheleleyo kwaye zingakudiki umzuzwana. Kananjalo, awuyi kuhlala wedwa; Unamaqabane amathathu aza kukukhapha naphina apho ufuna khona kwaye akuncede woyise iintshaba zakho.
Imeko apho yonke into yenzeka khona, isixeko, apho iqela labangendawo lifikile khona, laxhwila abantu ukuba benze amalingo amabi. Abantu abasetyenzisiweyo kuvavanyo bajike baba ziZombi, kwaye nguwe kuphela, ngoncedo lwabanye oogxa bakho, onokuboyisa, ukuze babuyisele yonke into esiqhelweni.
Lo mdlalo unobunzima obumalunga ne-40 MB, Ayisiyongxaki ekuthandeni kwayo esekwe ngaphezulu kokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezili-100.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Eyona midlalo ilula yokukhanya ye-Android
Eyona midlalo mihlanu mihle ye-Android
IXigmer Lunar X01, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso